Ra?isal wasaaraha dalka oo loogu baaqay in uusan xukuumadiisa ku darin wasiiradii la cayriyey – Radio Daljir
Diseembar 17, 2013 2:15 b 0
Muqdisho, December 17, 2013 – Xildhibaano ka tirsan baarlamanka federaalka ee Soomaaliya ayaa ra?isal wasaaraha cusub ee dalka ugu baaqay in uusan soo celin qaar golihii xukuumadii la tuuray ee uu horkacayey ra?isal wasaare Cabdi faarax shirdoon.
Ra?isal wasaaraha cusub ee dalka Dr. Cabdiweli Sheikh Axmed ayey ugu baaqeen inuu hakiyo soo celinta wasiiro dhowr ah oo ka tirsanaa xukuumadii hore, waxaa ay tilmaameen in xukuumadii hore waxqabad xumo xilka looga tuuray.
?Waxqabad xumo ayaa lagu eedeyey waana la turay xukuumadii hore, waxaan ka digaynaa isla markaasna kula talinaynaa ra?isal wasaaraha cusub in aanu soo celin wasiiro hore kalsoonida loogala noqday.? Ayuu yiri Xildhibaan Cabdibare Yuusuf oo Muqdisho kula hadlay saxaafada.
Baarlamanka ayaa ku celceliyey in loo baahan yahay in ra?isal wasaaruhu ka fiirsado golaha wasiirada cusub ee iman doona, Xildhibaan Yacquub Cali Maxamed oo isna ku jira Baarlamanka ayaa sheegay in ra?isal wasaaraha laga rabo xiligan is bedel dhab ah.
?Waxaan codsanaynaa in ra?isal wasaaruhu keeno xukuumada tayo leh oo qaban karta shaqada loo dhiibay iyo tan hortaala. Xukuumadii hore waa la eryey shaqadeeda oo liidatay darteed.? Ayuu yiri Xildhibaan Yacquub Cali.
Arbacada beri ayaa la filayaa in la horgeeyo baarlamanka ra?isal wasaaraha cusub ee dalka Dr. Cabdiweli Sheikh si loo siiyo codka kalsoonida ama loo diido, kadib hadii ra?isal wasaaruhu guulaysto waxaa la sugayaa dhismaha xukuumad dhamaystirsan.